Sarkaal katirsan haayada nabadsugida DFS oo ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSarkaal katirsan haayada nabadsugida DFS oo ku dhintay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
Qarax gaari Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mid kamid ah saraakiisha ciidamada nabadsugida dowlada federaalka Soomaaliyan ayaa maanta oo Arbaco ah lagu dilay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen saraakiisha dowlada.
Cali Gaashaanle oo ah taliyaha ciidamada aamaanka ee degmada Cabdicasiis ayaa wakaalada wararka dowlada federaalka Soomaaliya ee Sonna u sheegay in sarkaalka dhintay gaarigiisa loogu xiray qarax.
Sarkaalka dhintay ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Shuuriye, sida ay tabiyeen warbaahinta maxaliga.
Ma jirto cid si dhaqso u sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse kooxda Al-Shabaab ayaa horey kan mid lamid u qaaday.